Tag: Amni | Sagal Radio Services
Amniga Shabellaha Dhexe oo laga shiray
Guddiga ammaanka ee maamulka Shabeelaha Dhexe, ayaa kulan ay ku yeesheen magaalada Jowhar ugu dooday sidii wax looga qaban lahaa falalka amni darada ah iyo qaraxyada qorsheysan ee ka jira qaar ka mid ah deegaanada gobolka.
Kullan amniga looga hadlayay oo Garroowe lagu qabtay
Sagal Radio Services • News Report • February 28, 2013
Kullan looga hadlaayay nabad galyada Puntland, ayaa shalay galinkii dambe lagu qabtay magaalada Garroowe, kaa oo ay ka qeyb galeen qeybaha bulshada ee Puntland.
Madaxweyne Xasan Sheekh "Britain waxay naga caawineysaa dhinaca amniga"
Sagal Radio Services • News Report • February 8, 2013
Madaxweynaha dowladda Federaal-ka Soomaaliya, Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay in ciidamada ka socda Ingiriiska ee tagaya Soomaaliya ay gacan ka gaysanayaan amniga dalka.
Degmada Hodan oo marti galisay kullan amniga Banaadir looga hadlayay
Kullan amniga looga hadlayay, ayaa Shalay lagu qabtay degmada Hodan ee gobolka Banaadir, kaas oo ay ka qeyb galeen madaxda gobolka Banaadir iyo kuwa degmada.
Howl gallo amniga lagu sugaayo oo Balad-weyne laga billaabayo
Guddoomiyaha maamulka gobolka Hiiraan ee dowladda Soomaaliya, C/fataax Xasan Afrax ayaa ku baaqay in la qaado howgal ballaaran oo lagu beegsanayo hoggaamiyeyaasha Xarakada Al-shabaab oo uu ku tilmaamay kuwo dhibaato ku haya shacabka Soomaaliyeed.